Isra’iil oo sheegtay inay dib u bilaabayso qaabilaada Itoobiyaanka Yuhuuda ah! [Daawo] - iftineducation.com
Isra’iil oo sheegtay inay dib u bilaabayso qaabilaada Itoobiyaanka Yuhuuda ah! [Daawo]
iftineducation.com – Maamulka Isra’iil ayaa sheegay inay dhawaan dib u furi doonaan mashruucii ay ku qaabilayeen dadka Yuhuuda kasoo jeeda ee ku nool dalka Itoobiya.
Barnaamijka ayey horey Isra’iil sharciga ugu siisay Itoobiyaan badan oo sheegay inay yuhuud yihiin, balse waxaa la joojiyey sanadkii 2013. Xiligaasi ayuu maamulka Isra’iil sheegay inay dhamaadeen dadkii Yuhuuda ahaa ee ku sugnaa Itoobiya.
Balse go’aankan ayaa keenay in ay kala go’aan qoysas badan oo Itoobiyaan ah oo qaarkood degenaansho ka helay dhulka Isra’iil ay heysato, halka kuwo kalena loo diiday inay halkaasi yimaadaan.
Sharcigan cusub ee loogu magacdaray “Aliyah” ayaa qeexaya in qofkii cadeeya inuu asal ahaan kasoo jeedo Yuhuuda, uu degenaansho iyo sharci ka heli doono maamulka Isra’iil.
Itoobiyaanka loo aqoonsaday inay yuhuud yihiin ayaa inta badan cunsurinimo kala kulma Yuhuuda Cadaanka ah oo asalkooda kasoo jeedo Ruushka iyo Yurub kuwaasi oo ah kuwa gacanta ku haya awooda maamulka Isra’iil.
Sanadkii lasoo dhaafay ayey xiisado ka dhasheen dhulka Isra’iil maamusho kadib markii koox Yuhuud cadaan ah ay jirdil u geysteen askari madow oo Yuhuud ah, waxayna taasi keentay in madowga (Itoobiyaanka) yuhuuda ah ay banaanbaxyo ka dhigaan dhulkaasi.
Isra’iil ayaa dooneysa inay sharci siinta Itoobiyaanka u adeegsato inay hesho dad badan oo Yuhuud ah si ay ugu babac-dhigto tirada dadka Falastiiniyiinta ah ee ka badan dadka sheegta Yuhuuda.
MAXAAD KA TAQAANAA XUBINKA BUUXISA BOOSKII KINTIRKA OO HADII DUMARKA LAGA TAABTO RAAXO AY LA SUUXAYAAN